ပြည်သူ့ဘုန်းဘုန်း: October 2008
Posted by Ashin dhamma at 7:13 AM0comments
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမဟာမိတ်များနှင့် အနီးကပ် လက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်မည်
Posted by Ashin dhamma at 9:00 PM0comments
No ifs or buts onlyamust
There is no can
There is no could
There is no would
There is onlyamust.Burmese regime must finish in 2009….
There is no ifs or buts onlyamust…….
Posted by Ashin dhamma at 6:02 PM0comments
Posted by Ashin dhamma at 6:07 PM0comments
Posted by Ashin dhamma at 5:59 PM0comments
Posted by Ashin dhamma at 1:53 AM0comments
ရွှေဝါရောင် သံဃာတော်တပါး ထိုင်းနယ်စပ်သို့ တိမ်းရှောင်
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ အောက်တိုဘာလ 22 2008 20:10 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ စစ်အစိုးရက ဖမ်ဆီးရန် အလိုရှိနေသော သံဃာတော်တပါး ယမန်နေ့က ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်သို့ ထွက်ပြေး ရောက်ရှိလာသည်။
သက်တော် (၃၃) နှစ်၊ ၀ါတော် (၁၄) ၀ါ ရှိပြီဖြစ်သည့် ရဟန်းတော် ဦးဣဿရိယ က ထောက်လှမ်းရေးများက လိုက်လံစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်လာ၍ လူဝတ်လဲ တိမ်းရှောင်လာရသည်ဟု ပြောသည်။
ယမန်နှစ် စက်တင်ဘာလဆန်းက ပခုက္ကူမြို့တွင် သံဃာတော်များ ဦးဆောင်သော စစ်အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး လမ်းပေါ်ဆန္ဒပြပွဲများ ဖြစ်ပွားရာတွင် စတင် ပါဝင်ခဲ့မှုကြောင့် အာဏာပိုင်များ၏ အငြိုးထားခြင်း ခံရသည်ဟု ဆရာတော်က ပြောသည်။
ဆရာတော်သည် မင်းသုညဟူသော ကလောင်အမည်ဖြင့် စစ်အစိုးရကို အုံကြွဆန့်ကျင်ရန် ရေးသားမှုများ ပြုခဲ့ပြီး ပြည်ပ သတင်းဌာနများသို့ သတင်းပေးပို့ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
"သူတို့က ဦးဇင်းကို တိုက်ရိုက် မသိတာလည်း ပါလိမ့်မယ် ထင်တယ်။ သူတို့က ဦးဇင်းကို ကလောင် အနေနဲ့ပဲ သိတယ်။ အဲဒီ့ ကလောင်ပိုင်ရှင်က ဘယ်သူဆိုတာကို သူတို့ မသိဘူး။ သူတို့အနေနဲ့ စုံစမ်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဦးဇင်းတို့ရဲ့ မိတ်ဆွေ အသိုင်းအ၀ိုင်းတွေကလည်း ဒါကို အထူး လျှို့ဝှက်ထားတယ်။ အဲဒီလို ဘယ်သူဆိုတာကို အတိအကျမသိတဲ့ အတွက်ကြောင့် ဖမ်းဆီးခံရတာမျိုး မရှိဘူး" ဟု သူက မဇ္ဈိမကို တယ်လီဖုန်းမှတဆင့် ပြောပြသည်။
ဦးဣဿရိယသည် မန္တလေးမြို့ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ ကျီးလင်းကျောင်းတိုက်တွင် စာသင်သားတပါး ဖြစ်သည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့က ပခုက္ကူမြို့ရှိ သံဃာတော်များ၏ မေတ္တာပို့ လမ်းလျှောက်ရာတွင် ပါဝင်သူအချို့ကို စစ်အစိုးရက ရိုက်နှက်ခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အများစုဖြစ်သော နိုင်ငံတွင် သံဃာတော်များက အစိုးရကို ပြန်လည် တောင်းပန်မှုပြုရန် တောင်းဆိုသော်လည်း အစိုးရက လိုက်လျောမှုမပြုရာမှ နိုင်ငံနေရာအနှံ့ ဆန္ဒပြမှုများ ပြန့်ပွားလာခဲ့သည်။
Posted by Ashin dhamma at 9:26 AM0comments
ကိုမင်းကိုနိုင် ၏ ( ၄၆ ) နှစ်မြောက် မွေးနေ့ အခမ်းအနား ကျင်းပ
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် ၏ ( ၄၆ ) နှစ်မြောက် မွေးနေ့ အခမ်းအနား ကို မလေးရှားရောက် မြန်မာလူငယ်များ စုပေါင်းကျင်းပ။
၁၈ ရက် ၊ ၁၀လ ၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ကြရောက်သော ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် ၏ ( ၄၆ ) နှစ်မြောက် မွေးနေ့ အခမ်းအနားကို ယမန်နေ့ ည ၉း၃၀ တွင် မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့ ဘူကစ် ဆာဒန်း နယ်မြေရှိ မြန်မာလူငယ်များမှ စုပေါင်း ဂုဏ်ပြု ကျင်းပကြ၍ မလေးရှားရောက် မြန်မာများအပါအဝင် မြန်မာအရေးကို စိတ်ဝင်စားသော ဒေသခံ နိုင်ငံသားများ တက်ရောက်ကြပါသည် ။
အခမ်းအနားကိုဦးဆောင် ကျင်းသည့် လူငယ်များမှ မွေးနေ့ အခမ်းအနားကျင်းပ ပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ၊ အဖွဲ့ အစည်းများမှ ပေးပို့လာသော မွေးနေ့ သဝဏ်လွှာများကိုဖတ်ကြားကာ ၊ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာသည့် မလေးရှားရောက် မြန်မာလူငယ်များမှ မတရားဖမ်းဆီးအကျဉ်းကျခံနေရသော မွေးနေ့ရှင်၊ ၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်အတွက် ဂုဏ်ပြုကဗျာများ ကို ရွတ်ဆို ဂုဏ်ပြု ကြပါသည်။
ဆက်လက်၍ အခမ်းအနားအစီအစဉ်အရ တေးသံရှင် ထက်အောင်ရှိုင်းနှင့်အဖွဲ့မှ မွေးနေ့ရှင် ကိုမင်းကိုနိုင် အတွက် ဂုဏ်ပြုရေးဖွဲ့ထားသော တေးသီချင်းများနှင့် သီဆိုဖျော်ဖြေကာ တက်ရောက်လာကြသော လူငယ် များမှ တပျော်တပါး ပူးပေါင်းပါဝင်သီဆိုကြကာ မွေးနေ့ရှင်ကိုယ်စား မွေးနေ့ကိတ်ကိုလှီးဖြတ်၍ မတရားဖမ်းဆီး အကျဉ်းကျခံနေရသော မွေးနေ့ရှင်နှင့်တကွ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အားလုံး အမြန်ဆုံးလွှတ်မြောက်ကြပါစေကြောင်း ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သကာ အခမ်းအနားကို အောင်မြင်စွာ ရုတ်သိမ်းခဲ့ကြပါသည်။
ထို့နောက် ယနေ့ ၁၉ရက် ၊ ၁၀လ ၊ ၂၀၀၈ ရက် တွင် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် နှင့်တကွ အကျဉ်းကျခံနေရသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံးအတွက် မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြိုရှိ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် လှုဖွယ်ဝတ္ထုများ ဆက်ကပ် လှုဒန်းကာ မွေးနေ့ရှင်နှင့်တကွ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံး လွတ်မြောက်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းကာ ကွာလာလမ်ပူ မြို့ ဒေသအသီးသီးရှိ မြန်မာလူငယ်များမှ ၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်အတွက် မွေးနေ့ ဆုတောင်းပွဲများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Posted by Ashin dhamma at 9:17 AM0comments
Posted by Ashin dhamma at 12:28 AM0comments
Posted by Ashin dhamma at 6:15 PM0comments
Posted by Ashin dhamma at 4:19 AM0comments
Moethway(GW)Oct2008 - UploadaDocument to Scribd
Posted by Ashin dhamma at 12:04 AM0comments
Posted by Ashin dhamma at 11:59 PM0comments
Posted by Ashin dhamma at 6:03 PM0comments
Generation Wave's Annual Report to Public 2008 Oct9- UploadaDocument to Scribd
Posted by Ashin dhamma at 5:56 PM0comments
Posted by Ashin dhamma at 1:01 AM0comments